Vanlọ ọrụ Hollywood Ihe efu - China Hollywood Efu Manufacturers, Suppliers
Hollywood efu YF-D-1
Jiri ezigbo Natalie mesie mpaghara ị na-abaghị uru! Featuring ngosi ngosi gi ka ihe ngosi gi kacha mma. Natalie nwere nnukwu drọwa abụọ nke gosipụtara na Knobs na-enweghị Mmasị nke Ihe efu efu. Abịa na ihe mgbochi mgbochi mgbodo nke enwere ike itinye na azụ maka nchekwa gị. A na-etinye nkedo na mgbidi mgbidi plastik maka arịọnụ!
Hollywood efu YF-C-1
Oghere Nchekwa efu maka nke a na-ele anya na ihe efu gị! Mara mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ọ bụrụ ebe naanị gị ga - anọ ma sie ike ịkwado Tebụl Ego Gị. Ihe eji emechi ihe eji emechi emechi na-egosi ihe mkpuchi anyị.
YF-HY-5 5 na-ese ihe
5 drawer Hollywood Vanity Mirror na Bulbs na Desk Set Black Inwe nsogbu nsogbu oghere na obere ụlọ gị? You nwetụla mgbe ị chọrọ akụkụ nke gị? You chọrọ ohere karịa iji chekwaa ihe ịchọ mma gị, ihe na-esi ísì ụtọ
YF-HY-4 8 eserese
8 drawer Hollywood Vanity Mirror na Bulbs na Desk Set Black Nke a Hollywood Glam Set nwere ihe niile ị chọrọ na ndị ọzọ.
YF-HY-3 3 eserese
Ejiri aka mee nke ọma, enyo anyị na-ere ere nwere nhọrọ nke nhọrọ ị chọrọ iji chọọ tebụl efu gị mma, ma ọ bụ dozie ya na mgbidi gị ma rụọ ọrụ nke na-ele anya mgbe ọ bụla ị banyere n'ime ụlọ.
YF-HY-2 11 drawer na-enweghị iko
N'oge a, tebụl efu na-eji ihe dị elu dị ọnụ ahịa dị oke ọnụ asọmpi. Ọ dịghị onye ga-egbochi mmadụ ịnweta ma ọ bụrụ na ị nwere ike iji ihe efu etemeete. Ọ bụrụ na ị na-achọ ihe efu ugbu a, enwere m obi ụtọ igosi ụzọ abụọ.
YF-HY-1 13 na-ese ihe
Nkwupụta kachasị na enweghị isi, na-egosi naanị Hollywood Frame nke pụrụ iche, nke dị oke egwu, na nke ọgbara ọhụrụ na-egosipụta ọhụụ ọhụrụ nke Hollywood na ọkaibe dị mfe nke mere ka imirikiti ndị na-ahụ maka etemeete nwee mmasị. Jikọọ na ọtụtụ puku ndị nwe obi ụtọ ma mee ka ọkụ gị kwa ụbọchị!